Yepasirose Inonyanya Kusarudzika Husiku Kirabhu LOUIS XIII Yekupa Ultra-Rare Tsvuku Dhizaini N ° XIII
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Yepasirose Inonyanya Kusarudzika Husiku Kirabhu LOUIS XIII Yekupa Ultra-Rare Tsvuku Dhizaini N ° XIII
Dzvanya apa kana iri pepanhau rako!
Kune chete 200 N ° XIII red decanters anowanikwa pasirese, zvinoreva kuti kugoverwa kunogumira kune imwechete decanter kirabhu pahusiku.
LOUIS XIII cognac ndiwo mhedzisiro yehupenyu kubudirira kwezvizvarwa zveCellar Masters, kusanganisa yakanakisa eaux-de-vie ichishandisa mazambiringa akarimwa chete muGrande Champagne. Izvo zvakakosha kuti LOUIS XIII ave neruzivo setsika, kudonha nedonhwe, kuratidza kuratidzwa kwenguva refu uye kuchichinja kwekuravira, mune imwe nguva yekugona. Vatengi vanoda kuyedza mhanza yavo nekuraira imwe yeN ° XIII Zviitiko vanogona kupinda paLOUIS XIII Society * kana kutenga zvakananga kuburikidza neakasarudza makirabhu ehusiku. A LOUIS XIII Brand Mumiriri achaonana nemumwe wavo kuronga iyi yakasarudzika mutambo. Chiitiko ichi chakasarudzika zvekuti pane mukana mukuru wekugamuchirwa pachinzvimbo chemuchina.
Yekutanga N ° XIII decanter yekuuya muUS ichavhurwa muna Gumiguru 15 ku OMNIA muLas Vegas. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kuwanikwa kwechigadzirwa, bata: [email inodzivirirwa]
WEDZIRA NGUVA Uine NZIRA INOKOSHA
Nguva ndiyo yakatsvuka yaLOUIS XIII, uye N ° XIII inotibvumidza kuti tiongorore kuratidzwa kutsva kwenguva. Hupenyu hwehusiku hunotsanangurwa nepfungwa yerusununguko, mafaro uye kupemberera, ese ayo anotorwa nekukudziridzwa neiyo N ° XIII yekuravira tsika: tsvuku imwe neimwe yakaverengwa sekristaro decanter, yakaratidzwa kubva pasi penzvimbo ye LED. Magirazi matanhatu matsvuku eespoke kristaro pane yakajeka tereyi inoperekedza, yakamira kunze kwevanhu. Tsvuku ndiko kutsanangura ruvara rwechiitiko, kutora iko kushuva, magetsi uye nehupenyu hwehusiku. LOUIS XIII anoshandiswa achishandisa yakakosha cognac pipette, inozivikanwa sePfumo, kuti iwedzere tsika yekudonha-ne-kudonhedza tsika. Iyo hwema uye manotsi einoshamisa cognac inogona kuzochengetwa pakureba. LOUIS XIII anogadzira mutinhimira wake wega husiku.
DECANERI YEMAHARA Neruoko
LOUIS XIII akabatana naSaint-Louis, mugadziri wegirazi wekare kwazvo muEurope, kugadzira inoshamisa yakagadzirwa nemaoko N ° XIII tsvuku decanter uye magirazi matsvuku ecognac. Huru tsvuku ine simba yegirazi inogona kuwanikwa chete uchishandisa nzira yakavanzika inoda kuwedzerwa goridhe. Saint-Louis 'akagovana kuda kwetsika, savoir-faire uye hunyanzvi zvinouya kuhupenyu mune zvisingawanzo decanters: inopepereswa, yakatemwa, yakashongedzwa uye yakanyorwa neruoko, uye imwe neimwe yakaverengwa, inopedzwa neLOUIS XIII siginecha dentelle spikes uye palladium mutsipa . Ichitevera N ° XIII kuravira tsika, vatengi vanogona kusiya kirabhu yeusiku neyavo N ° XIII decanter (kana mitemo yekirabhu nemitemo yemuno yepamutemo ichibvumidza) seyeuchidzo yakakoshesa yeusakanganwika husiku. Iyo NFC-inogoneswa yekumira inopa muridzi mukana wekupinda kune iyo LOUIS XIII Society uye neese nhengo dzebhenefiti.
Iyo LOUIS XIIII N ° XIII yakakurudzira kutengesa mutengo kunowanikwa pakukumbira.
* Iyo LOUIS XIII Society ikirabhu yemitezo yakazvimiririra yevaridzi veLOUIS XIII Cognac decanters.
Mupepeti mukuru ndiLinda Hohnholz.
Nzvimbo dzakanakisa dzepasirese dzekutenga imba nyowani yezororo
Beijing: Mitemo mitsva icharerutsira US-China bhizinesi kufamba
Cheers shamwari: Australia ndiyo nyika itsva yakadhakwa pasi rose
Kugadzirisa Kushanya kweRamangwana neNyika: Iyo itsva UNWTO Task Force Saudi Style
African Tourism Board: Tourism Pasina Zvipingamupinyi Zvino!
Hawaii Omicron Nyaya Yaonekwa Zvino
Nhamba yenyika dzakarohwa neOmicron itsva musiyano urikura
WTN VP Alain St.Ange paOcean Sustainability muASEAN
China inobvisa Boeing 737 MAX kudzokera kumatenga ayo
Zvitsva zveUS zvirambidzo zvekufamba mushure mekutyisidzira kweOmicron
UK inogona kubvisa vanoshandisa zvinodhaka mapasipoti avo izvozvi
Hofisi yaMayor yeInalåhan inodzorera chikwama chakarasika nemadhora zviuru zviviri kumuenzi wekuKorea
Brits inofamba kubva kumateru kuenda kumahombekombe munguva ino yechando
Hawaii in state of emergency zvino sezvo dutu guru rinopisa zvitsuwa
Kudada kweMontenegro Misha miviri Yakanakisa Yekushanyirwa Kwenyika
Al Qaeda, Islamic State pachinangwa chekuuraya muMalian Venice Dunhu reMopti
Urgent Omicron Nhau: Johnson & Johnson vanogona kugadzira Pfizer neModerna Kunyanya Kushanda
Sputnik V Vaccine, kiyi nyowani yeSaudi Arabian Tourism
Kukuru COVID-19 kubuda pangarava yeNorwegian Cruise Line yakavharirwa zvizere
SKAL Kusarudza Mutungamiri Wenyika Itsva: Sangana naBurcin Turkkan, muTurkey-America Anokurudzirwa Kutora Dambudziko iri.